Eucalyptus ho biomass | Fanavaozana maintso
Adriana | | Biomassa, Angovo azo havaozina
ny kininina Izy ireo dia hazo manana toetra mampiavaka ny fambolena toy ny biomassa ho an'ny famokarana angovo.
Satria ireo karazana ireo dia manana fitomboana haingana, ankoatry ny herin'ny Fitrohana CO2 amin'ny endrika biomassa. Mila rano, zezika ary fikarakarana kely ihany koa izy ireo raha oharina amin'ny voly na karazana hafa.
Izay no mahatonga ny tetik'asa maro izay mampiasa an'io karazana io ho biomassa amin'ny faritra samihafa eto an-tany hamokarana fahefana.
Saingy ny fampiasana ny fambolena kininina toy ny biomassa na ny karazany hafa dia tsy tokony hatao amin'ny fomba tsy voaomana satria tena ratsy ny manala ala ny tanindrazana mba hampidirana an-tsokosoko ny fambolena karazana.
Satria misy ny olana sasany toy ny famatsiana akora ho an'ny zava-maniry biomassa saingy voavaha ny hafa, izay tsy mamokatra.
Eucalyptus dia safidy mahaliana hamokatra angovo satria azo iainana ara-toekarena izy io ary manana toetra voajanahary mety ho an'ity fampiharana ity. Saingy tsy maintsy maharitra maharitra amin'ny tontolo iainana ihany koa satria raha tsy izany dia tsy azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra satria hitondra fahavoazana bebe kokoa noho ny tsara.
Ireo zavamiaina bitika dia miteraka olana ara-tontolo iainana matanjaka toa ny fahasimban'ny tany, ny fikaohon-tany ary ny fihenan'ny Agua ankoatry ny fanovana hafa ireo tontolo iainana tena lehibe. Mba hisorohana ireo olana ireo, ny faritany dia tsy maintsy dinihina sy baikoina amin'ny tokony ho izy, amin'ny fampiasana ny fepetra fiarovana ny tontolo iainana.
Ny teny lakile dia ny fifandanjana, hahatratrarana ny fampihavanana biomassa famokarana angovo nefa tsy manambany na manova ny tontolo iainana.
Azo atao ny mamokatra herinaratra amin'ny ambany vidin'ny tontolo iainana fa ny fibaikoana ny fanjakana sy ny andraikiny amin'ny orinasa mpamokatra dia takiana mba haharitra maharitra io karazana fambolena io.
Ny fampiasana karazana maro amin'ny famokarana biomassa no safidy ekolojika indrindra satria noho io fomba io dia kivy ny monokorona karazana.
Ireo politika ao raharaha mavitrika Tsy tokony hanimba ny tontolo iainana izy ireo, raha tsy izany dia tena hitondra vokany ratsy eo amin'ny antonony na maharitra ny vokany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Biomassa » Kininina toy ny biomassa
Biomassa Aragon dia hoy izy:
Valiny amin'ny biomassa Aragon
Maria Cristina Pico dia hoy izy:
Tianay ny hamboly kininina ary noho izany dia mampahafantatra ny tenanay amin'ny Internet. Izahay dia manao tetikasa hampiharana azy ary hahazoana famatsiam-bola. Ny tadiavinay dia ny handefasan'ny olona anay, ho maodely / mpitari-dalana, tetikasa iray izay nahomby tamin'ny fampiharana azy. Misaotra, salama ary mirary soa ho anao sy ireo hazo kinininao.
Maria Cristina sy Carlos Manuel avy any Kiobà
Valiny tamin'i María Cristina Pico
Miller Flores R. dia hoy izy:
Antenaina fa hiteraka fiantohana ara-bola bebe kokoa eto amin'ny firenentsika mba hiparitahan'ny toeram-pambolena ala maniry haingana, raha ny marina, manala tsindry hazo lena izy ireo, mamorona asa, ary ny metodolojia tia ny tontolo iainana dia azo fidina ho fampandrosoana ity karazana ity. ny fambolena, misy ny tany. Na izany aza, zava-dehibe ny mampahafantatra fa ity asa ity dia iharan'ny vitrika vetivety miankina amin'ny asa tokony hatao.
Valiny tamin'i Miller Flores R.
Ny dikan'ny fitaterana sy ny CO2